बलेको जन्मदनमा प्रेमिका नै पुगीन् केक काट्न, दाई भाउजु भन्दै कक्रोजले जिस्काएपछि चल्यो बिहेको कुरा, कहिले विबाह गर्दैछन् त बलेले ? हेर्नुहोस् भिडियोमा – Gazabkonews
बलेको जन्मदनमा प्रेमिका नै पुगीन् केक काट्न, दाई भाउजु भन्दै कक्रोजले जिस्काएपछि चल्यो बिहेको कुरा, कहिले विबाह गर्दैछन् त बलेले ? हेर्नुहोस् भिडियोमा
सागर लम्साल (बले) को आज जन्म दिन परेको छ। जन्म दिनकै अवसरमा बलेले आफ्नो अफिसीएल युट्युब च्यानल बले इन्टरटेनमेन्टमार्फत साडी मलमल बोलको गीत सार्बजनिक गरेका छन्। आईतबार बलेले प्रेस मिट गर्दै जन्मदिन मनाएका छन्।
र केक समेत का टेका छन्। बलेको जन्मदीनमा धेरै कलाकार हरु उपस्थिति भएका थिए। खास गरि प्रिस्मा, प्रिनसी बलेले प्रिस्माको बिषयमा पनि आफ्नो अभिवाक्ति दिएका छन्। बले भन्छन मेरो लागि प्रिस्मा, प्रिनसी दुवै एक हुन्। र बले ले प्रेमिका पनि सार्बजनिक गरेका छन् (भिडियो सहित)
पशुपतिनाथ मूल मन्दिरको ज्योतिर्लिङ्गमुनि सुनको जलहरी राख्नुअघि चाँदीको जलहरी मर्मतका लागि क्षमापूजा शुरु भएको छ । क्षमापूजा गर्न दक्षिण भारतबाट २५ ब्राह्मणलाई आमन्त्रण गरिएको छ ।क्षमापूजामा ९६ नेपाली ब्राह्मण गरी शनिबारदेखि १२१ ब्राह्मणले शिव र शक्तिको आराधना शुरु गरेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा प्रदीप ढकालले राससलाई जानकारी दिनुभयो । आगामी बुधबारसम्म क्षमापूजा हुनेछ ।
रणबहादुर शाहको शासनकालमा राखिएको चाँदीको जलहरी जीर्ण भएर जल, पञ्चामृतलगायत पशुपतिनाथलाई चढाइएका सामग्री चुहिएर भित्रसम्म पुग्ने गरेको थियो । वर्षौंँदेखि गर्न नसकिएको मर्मत गरी त्यसमाथि सुनको जलहरी राख्नुअघि क्षमापूजा शुरु भएको हो ।वर्षौंदेखि राखिएको चाँदीको जलहरी हटाउने भनी भइरहेको प्रचारप्रसार गलत रहेको कोषले जनाएको छ । चाँदीको जलहरी मर्मत गरी त्यसमाथि सुनको राख्न लागिएको हो । सुनको जलहरी निर्माण पनि शुरु भइसकेको कोषले जनाएको छ । एक हप्तामा सुनको जलहरी राख्ने गरी काम भइरहेको छ ।
पशुपति क्षेत्रमा महाशिवरात्रिको तयारी पनि शुरु गरिएको छ । विगत वर्षमा एक वर्षअघि नै भारतका विभिन्न अखडाबाट साधुसन्त पशुपति क्षेत्रमा आउने गरेकामा यस वर्ष अहिलेसम्म नआएको कोषले जनाएको छ । यस वर्ष फागुन २७ गते महाशिवरात्रि पर्व परेको छ ।कोरोना महामारीका कारण यस वर्षको महाशिवरात्रिमा विगत वर्षमा जस्तो भीड नहुने अनुमान गरिएको सदस्य सचिव डा ढकालले बताउनुभयो । यद्यपि मन्दिरमा आउने जति भक्तजनलाई भने दर्शन गराउने गरी कोषले तयारी शुरु गरेको छ । भारत र नेपालका विभिन्न अखडाबाट महाशिवरात्रिमा पशुपति आउने साधुसन्तको सूची विगत वर्षदेखि नै पहिले नै कोषमा आउने गरेको छ ।